Khabiirka Cimilada ah wuxuu qeexayaa Xiriirka Xiriirka, Wadooyinka, iyo Website Performance
Markaad la macaamilayso arrimaha ku saabsan suuq-geynta bogga suuq-geynta, SEO, iyo kuwa kale ee soo-galayaxeeladaha, waxaan ku guul dareysanay inaan ogaano sida waxqabadka goobta uu u saameeyo taraafigga iyo isugeynta. Xaaladaha badankood, dadku waxay diiradda saaraan qaabdhismeedkaiyo walxaha suuxinta kaliya. Qaybaha qaabdhismeedka shabakada internetka waxaa ka mid ah waxyaabo ay ka mid yihiin cinwaanada cinwaanka iyo tagska ee code-ka HTMLgoobtaada. Dhinaca kale, qaybaha suugaanta ayaa tixraacaya arrimaha sida qaababka naqshadda webka, xulashada kelmadaha, iyo contentdoorashooyinka. Inkastoo sida arrimahan ay door muhiim ah ka ciyaaraan shabakadda internetka, waxaa jira wax badan oo isku mid ah. Waxyaabaha kaleka ciyaaraan door muhiim ah oo ku saabsan geeddi-socodkan waxaa ka mid noqon kara hawlgalka goobta - intertops bonus code march 2015. Marka la shaqeynayo website, waxqabadka bogaggawaa arrin laga yaabo inaad u baahato inaad tixgeliso.
Hawlgallada websaydhku waa dareenka iyo jawaab-celinta waayo-aragnimada booqashada ashabakada qofka isticmaala. Waxaa saameyn ku yeelan kara arrimaha sida xawaaraha server, taraafikada, xawaaraha xawaaraha iyo koodka laftiisa. GoormaIsku hagaajinta shabakadaha xawaaraha, adeegsiga ilo yar yar iyo isdhexgalka bogga wareega ayaa ah qaar ka mid ah arrimaha muhiimka ahwaxaa laga yaabaa inaad u baahato in aad wax ka bedesho goobtaada.
Ross Barber, Maareeyaha Guusha Macaamiisha Sare Adeegyada Dijital ah, waxay qeexaysaa qaar ka mid ah arrimaha waxqabadka bogagga oo saameyn kara taraafikada iyo isbeddelada:
1. Uptime Site
Tani waa waqtigii aad ku nooshahay. Si aad u heshid oo aad u aragto macaamiishaada,shabakadaadu waa inay ahaato. Dadku waxay necbaadaan khalad 404 fariin ah markay booqanayaan bogga internetka. Sida ugu badan ee qaladka ma saameyn doontoDarajadaada, waxay saamaysaa khibrada macaamiisha iyo warcelinta. Websaydhada ka baxa wakhtiyada qaarkood waxay u baahan yihiin hagaajin tan..301 dib u habeynwaxay noqon kartaa xal degdeg ah.
2. Waxqabadka Mobile
Waxqabadka website-kaaga ee aaladaha mobile waxay saameeyeen rikoodhka ka dib Google"Mobilegeddon" update update 2017. Isticmaalayaal badan oo internetka waxay ku tiirsan yihiin taleefannada gacanta si ay u helaan goobaha intooda badan. Shuruudaha naqshadaha shabakada waa inay ku jiraanoo ah bogga saaxiibtinimo ee loogu talagalay dadka isticmaala telefoonnada. Google ayaa ciqaabi kara boggooda iyada oo aan laga helin bogga wareega bogga iyadoo loo marayo darajada.
3. Xawaaraha Site
Waqtiga ay qaadato boggaga si uu uugu soo galo boggaaga internetka waa arrin isir ah. Raadimashiinnadu waxay ku tiirsan yihiin "bogga waqtiga bogga" sida habka shabakadaha internetka oo leh ereyo isku mid ah. Waxaad kordhin kartaa "xawaaraha goobta" bysameynta isbeddelada sida kor u qaadista xawaaraha wareegga ama isticmaalida muuqaalka iyo faylasha kale kuwaas oo ka yaryar cabbirka
4. Lahaanshaha Waxyaabaha Leh
Waa lagama maarmaan in la xakameeyo sahayda macluumaad kasta ee bog kastaee boggaaga. Mawduucyada la jabsaday sida sawirada maqan waxay saameyn karaan darajadaada. Dhigista wixii ka maqan waa muhiim. Kiiskafaylasha warbaahinta, hab fudud oo 301 ah ayaa dib u hagaajin kara wax walba si ku meel gaar ah, laakiin waxaad u baahan kartaa xal joogto ah.
Dadaal kasta oo internetka ah si aad u heshid darajo mashiinno raadin ama kor loogu qaado baabuurtawaxaa ka mid ah in la hagaajiyo bogga iyo content. Istaraatiijiyada suuq-galka internetka, aragtida macaamilka dhammaadka waa badanaayoolka koowaad. Habka goobta uu dareemayo iyo waayo-aragnimada rayi-gelinta qofku wuxuu ku raaxaystaa inta uu ku foogan yahay inuu ku jiro naqshadda webka, horumarka,iyo martigelinta. Marka arrimahan soo ifbaxa ah ee waxqabadka bogga ah, ayaa darajooyinka raadinta ay u badan tahay inay sare u qaadaan, gaadiidku wuxuu noqon doonaakordhinta, ugu dambayntii, jawaabta macaamiilka ee dib u eegista waxay noqon doontaa mid wanaagsan oo ugu dambeyntii kordhin doonta isbarbar dhigga boggaaga.Natiijooyinku si degdeg ah uma jeedaan isla markiiba isbeddeladan ayaa lagu dabaqayaa. Bedelkeeda, way fiicnaanayaan marka aad sameysid isbedelada lagama maarmaanka u ah goobtaada.